मान्छेसँग बोल्ने मैना चरी, मान्छेको जस्तै हुबहु आवाज निकाल्छ चराले [हेर्नुहोस भिडियो] – दैनिक नेपाल न्युज
मोरङको लेटाङमा एउटा घर छ त्यो घरमा एकजना बुढी मान्छे बस्छिन दिनभर । उनी छोरी ज्वाइका घरमा बस्छिन । उनका ज्वाइँ काठका मिस्त्री हुन । दैनिकी ठेक्का पट्टाको काम गर्छन । बिहान सबेर उठेर हिडेका उनी साझ परेपछि मात्र आउछन घर । छोरी पनि दिनभर काममा जान्छिन । घरमा बुढी आमा मात्र एक्लै बसेकी हुन्छिन । अल्छी लाग्छ बोल्ने कोहि छैन । दिनभरी घरमा एक्लै बसेकी बुढी आमाको सहारा अनि बुढी आमाको बोल्ने सारथि एउटा मैना चरी छ । जसले दिनै पिच्छे आमा भन्दै बोलेर दिनभरी साथी दिन्छ ।
भाग्यले जुराएको त्यो मैना चरी जङ्गलमा बेबारिसे रुपमा पखेटा भाचिएर लडिरहेको अवस्थामा तिनै बुढी हजुरामाका नातिले भेटेर ल्याएका थिए ।धेरैदिन राखेर औसधि उपचार गरेर निको बनाएपछी त्यो मैनालाइ जङ्गलमा लगेर छोडेका थिए । जङ्गलमा छाडेको मैना जङ्गलबाट घर पुग्दा आफुभन्दा अगाडि मैना घरमा पुगेर बसेको देखेर छक्क परे । जति पठाउन खोजेपनी मैना जान मानेन र घरकै सदस्यका रुपमा बस्दै आएको धेरै समय बितिसकेको छ । घरमा भोक लाग्दा खाना आफै मागेर खाने अनि आमा भनेर बोलाउने गरेको आमाले बताइन् । साथै उनले भनिन मैना बिना आफू बाच्न नसक्ने भैसकेको र मैना आफ्नै छोराछोरी जस्तै लाग्ने बताउछिन उनी ।
मैनाले गाउका कोहि आउदा को मान्छे हो? भनेर सोधेपछी त्यहा पुग्ने कोहि पनि नया मान्छे चकितमा नै पर्छन । सबैलाई के छ खबर कहाँ बाट आउनुभयो अनि को मान्छे हो भन्दा छक्क पर्ने गरेको गाउले बताउँछन् । मान्छेसँग मान्छेले जस्तै हुबहु बोल्ने मैना कस्तो छ त ? कसरी बोल्छ ? के भन्छन घरका सदस्य मैनाको बारेमा तलको भिडियोमा हेर्नुहोस तपाईं पनि चकित हुनुहुनेछ । अचम्म लाग्न सक्छ हेर्नुहोस त तलको भिडियो
समाजसेवा गर्दा गर्दै अचानक शिशिर भण्डारीले पिटाई खाए, गाउँमा पुग्दा शिशिरलाई कस्ले पिट्यो ? (भिडियो हेर्नुस)